ဒူဒူကြီး: Control Valves (၁၁) - Controllers and Sensors
ကိုထွန်း။ control Valves တွေအကြောင်းကို၊ ပြောမယ်ဆိုရင် "Controllers နဲ့ Sensors" တွေ အကြောင်းကိုလည်း၊ ထည့်ပြောဖို့လိုမှာဖြစ်သလို၊ "self-acting temperature control valves" တွေနဲ့ "self-acting pressure control valves" တွေ အကြောင်းကိုလည်း၊ ထည့်ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ "Basic Control Theory" ကိုတော့၊ ဒီနေရာမှာ ပြန်လည်၊ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ controllers နဲ့ sensors တွေဟာ၊ control system ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့၊ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ sensor မှပေးပို့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို၊ controller မှလက်ခံယူပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ကာ control valves ကိုရွှေ့လျှားစေပါတယ်။
Fig. Pneumatically operated quick closing valve
Controllers - "on/off valve" တွေနဲ့ "actuator" တွေကို၊ thermostat မှတဆင့်၊ တိုက်ရိုက် control လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ 'high limit safety control' အဖြစ်၊ fuel supply ရုတ်တရက် ဖြတ်တောက်ဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ အခါ 'snap' action သုံးပြီး၊ valve ကိုပိတ်နိုင်ပါတယ်။ quick closing valves တွေဟာ၊ snap action နဲ့ တိုက်ရိုက်ပိတ်နိုင်တဲ့ control valves တွေဖြစ်ပါတယ်။ process ရဲ့ လိုအပ်ချက်ဟာ၊ 'sophisticated' အနေနဲ့ နက်နဲရှုပ်ထွေးတဲ့ အခါမှာတော့၊ control requirements အရ၊ controllers တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ controller ဟာ၊ signal ကိုလက်ခံရယူပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ကာ actuator ရွှေ့လျှားဖို့ signal ပေးပို့တဲ့၊ device ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေါတ် မှာတော့ microchip, integrated circuits နဲ့ computers တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် functions တွေကို၊ controllers မှတဆင့်၊ ဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။ controllers အများစုဟာ၊ digital နဲ့ microprocessor based controllers တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးအန္တရာယ်များတဲ့ 'dangerous atmosphere' မှာ၊ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု risk of explosion မဖြစ်ပေါါနိုင်တဲ့၊ 'intrinsically safe pneumatic controllers' တွေကို အသုံးပြုကြ သလို၊ 'explosion-proof' နဲ့ 'flameproof electrical controllers' တွေကိုလည်း၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Single loop controller
Fig. Multi-loop controller
controllers တွေကို၊ "single loop controller" နဲ့ "multi-loop controller" ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ sensor တခုတည်းမှ၊ actuator တခု သို့မဟုတ် valve တလုံးတည်းကိုသာ၊ operate လုပ်တဲ့ controller ကို၊ single loop controller အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ sensors အများအပြားနဲ့၊ control valves အရည်အတွက်၊ အမြောက်အများကို၊ operate လုပ်တဲ့ controller ကိုတော့၊ multi-loop controller အဖြစ် သတ်မှတ် ပါတယ်။ single loop controllers တွေဟာ၊ sensor တခုမှ၊ signal တခုတည်းကိုသာ လက်ခံပြီး၊ controller မှ actuator သို့ signal တခုတည်းသာ ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်၊ signal input/ out အနေနဲ့ single input/ output အဖြစ်သာ၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ multi-loop controllers တွေကတော့၊ signal အများအပြားကိုလက်ခံပြီး၊ signal အများအပြား ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်၊ multi input/ output အဖြစ်၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
controllers တွေမှ၊ output signal ထုတ်ပေးတဲ့အခါ၊ per-determined အနေနဲ့၊ အချိန်တခုယူရပြီး၊ 'pre-set time' လို့ခေါါပါတယ်။ signal ဝင်လာတဲ့အခါ၊ pre-set time မတိုင်ခင်၊ controller switch စတင် 'on' ပါတယ်။ signal ဝင်လာတဲ့အချိန်မှ၊ controller switch စတင် 'on' တဲ့ အချိန်ကြားမှ၊ အချိန် အကွာအဝေးတခုကိုတော့၊ 'elapsed time' လို့ခေါါပါတယ်။ controller မှ output signal ထွက်သွားပြီး၊ controller switch 'off' ရာမှာလည်း၊ 'elapsed time' ရှိပါတယ်။ input signal စတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှ၊ output signal ထွက်သွားချိန်အထိ၊ controller အလုပ်လုပ်တဲ့၊ အချိန်စုစုပေါင်းကို 'real time' လို့ခေါါပြီး၊ real time မှာ pre-set time နဲ့ elapsed time တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Fig. Typical multi-sequence ramp and dwell pattern
controllers တွေဟာ 'ramps and dwells' pattern နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ controlled medium ရဲ့ temperature ကို 'ramp' အနေနဲ့ မြှင့်ယူပြီး၊ pre-set value တန်ဖိုးတခုမှာ၊ 'dwells' အနေနဲ့ ထိန်းထားခြင်းကို၊ 'ramps and dwells' pattern လို့ခေါါပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် temperature changing function အနေနဲ့ မြှင့်ယူခြင်းဟာ 'ramp' pattern ဖြစ်ပြီး၊ temperature maintaining function အနေနဲ့၊ ထိမ်းထားခြင်းဟာ 'dwells' pattern ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ pressure ကိုလည်း၊ 'ramps and dwells' pattern နဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ single loop controllers တွေဟာ၊ typical sequence pattern အနေနဲ့ ramps and dwells pattern ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ multi-loop controllers တွေဖြစ်တဲ့ 'Programmable Logic Controller (PLC)' တွေဟာလည်း၊ sequence patterns တွေအများအပြားကို၊ တချိန်တည်းမှာ၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Sensors - sensors နဲ့ transducers တွေကို၊ measuring pressure, level, humidity နဲ့ အခြား physical properties တွေကို၊ တိုင်းတာရာမှာ၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ "Control Valves" ခေါင်းစဉ်အောက် မှာတော့၊ valve actuation နဲ့ ပက်သက်တဲ့၊ filled system sensors, resistance temperature detectors (RTDs), thermistors နဲ့ thermocouples တို့ရဲ့ အခြေခံ အလုပ်လုပ်ပုံတွေ ကိုသာ၊ ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
sensor မှ၊ထုတ်ပေးတဲ့၊ signal ဟာ အရမ်းကို၊ သေးငယ်ပါတယ်။ signal ကို၊ effectively အနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် သုံးလို့ရစေဖို့၊ signal conditioning အနေနဲ့ amplification လုပ်ကာ၊ ချဲ့ထွင်ပေးရ ပါတယ်။ sensor ကထုတ်ပေးတဲ့၊ signal ရဲ့ physical characteristic တခုမှ၊ အခြား physical characteristic တခုကို၊ 'transducer' ကိုအသုံးပြုကာ၊ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ signal ကို၊ တနေရာမှ တနေရာသို့ ပို့ပေးတဲ့ transmission system ဟာလည်း၊ error ပေါါပေါက်စေတဲ့၊ potential source တခုဖြစ်ပါတယ်။
Filled system sensors - pneumatic controllers တွေမှာ၊ filled system sensors တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ temperature တိုင်းတာတဲ့အခါ၊ mercury ဖြည့်ထားတဲ့၊ 'bourdon tube' ကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ health and safety reasons တွေကြောင့်၊ mercury အစား nitrogen လို၊ inert gas တွေကိုသာ၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ temperature changes ကြောင့် 'bourdon tube' အတွင်းမှ fluid ဟာ၊ expand အနေနဲ့ ကျယ်သွားနိုင်သလို၊ contracts အနေနဲ့လည်း ကျုံ့သွားနိုင် ပါတယ်။
Fig. Liquid filled system sensor and gas filled or vapour pressure system
fluid ရဲ့ expands or contracts ကြောင့်၊ bourdon tube ဟာလည်း၊ straighten out အနေနဲ့ မူလနေရာမှ၊ ရွှေ့ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ bourdon tube မှ၊ မူလနေရာမှ၊ ရွှေ့ထွက်သွားတဲ့ movement ကြောင့်၊ pneumatic controller ရဲ့ lever လည်း ရွှေ့လျှားလှုပ်ရှားသွားပြီး၊ controller မှ output signal ကို၊ ထုတ်ပေးပါတယ်။ pressure ကို တိုင်းတာရာမှာလည်း၊ pressure pipe ကို၊ bourdon tube နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ pneumatic controllers တွေမှာ၊ bourdon tube အစား၊ bellows တွေကိုလည်း၊ အသုံးပြုလေ့ ရှိပါတယ်။
Resistance temperature detectors (RTDs) - temperature ပြောင်းလဲမှုကြောင့်၊ သတ္တုတွေရဲ့ resistance လိုက်ပါပြောင်းလဲတဲ့ အချက်ကို၊ အခြေခံပြီး၊ RTD တွေ အလုပ်လုပ် ပါတယ်။ RTD တွေဟာ၊ temperature အပြောင်းအလဲ changes ကို၊ output signal အဖြစ် electrical resistance changes အနေနဲ့ပြောင်းလဲ၊ ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်၊ transducers တွေအဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ platinum, copper နဲ့ nickel အစရှိတဲ့၊ သတ္တုတွေကို resistance temperature detectors တွေမှာ၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. RTD element typical resistance/ temperature graphs
resistance temperature detector ဟာ၊ 0°C မှာရှိမယ့် resistance တန်ဖိုးကို၊ အခြေခံပါတယ်။ temperature ဟာ 0°C မှ 100°C သို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါ၊ resistance တန်ဖိုးလည်း၊ လိုက်ပါပြောင်းလဲ သွားပါတယ်။ အသုံးများတဲ့၊ resistance temperature detector ကတော့၊ platinum ကိုအသုံးပြု ထားတဲ့၊ platinum RTD ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Typical 'Pt100' - resistance temperature sensor
platinum RTDs တွေကို၊ 'Pt100' sensors တွေလို့လည်းခေါါပါတယ်။ temperature 0°C မှာ၊ resistance တန်ဘိုး 100 ohms ရှိတဲ့ အတွက်၊ 'Pt100' sensor အဖြစ်၊ သတ်မှတ်ခေါါဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ resistance temperature detectors တွေကို၊ (- 200°C ~ + 800°C ) အထိ၊ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ accuracy အနေနဲ့ (0°C ~ 100°C) အတွင်း၊ (± 0.5 %) ရှိပြီး၊ temperature ပြောင်းလဲတဲ့အခါ၊ resistance ဟာ၊ 'virtually linear' အနေနဲ့ လိုက်ပါပြောင်းလဲပါတယ်။ resistance တန်ဖိုး လိုက်ပါပြောင်းလဲရာမှာ၊ သေးငယ်တဲ့ small changes ပမာဏအနေနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အတွက်၊ measurement အဖြစ် တိုင်းတာတဲ့အခါမှာ၊ အထူးသထိထားရပါတယ်။
Thermistors - semi-conductor materials တွေကို၊ အသုံးပြုထားတဲ့ thermistors တွေမှာ၊၊ temperature ပြောင်းလဲတိုင်း၊ resistance တန်ဖိုးဟာ၊ ပမာဏကြီးမားစွာ large changes အဖြစ်၊ လိုက်ပါပြောင်းလဲပါတယ်။ resistance တန်ဖိုးပမာဏပြောင်းလဲမှုဟာ၊ 'non-linear' အနေနဲ့ လိုက်ပါပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ thermistors တွေကို၊ 'NTC' လို့ခေါါတဲ့ 'negative temperature coefficient thermistor' နဲ့ 'PTC' လို့ခေါါတဲ့ 'positive temperature coefficient thermistor' ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Negative temperature coefficient thermistor
Fig. Positive temperature coefficient thermistor
temperature မြင့်တက်သွားတဲ့အခါ၊ thermistor မှာ resistance တန်ဖိုးပမာဏကျဆင်းလာခြင်းကို၊ negative temperature coefficient လို့ခေါါပြီး၊ temperature ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ၊ resistance ပမာဏမြင့်တက်လာခြင်းကိုတော့၊ positive temperature coefficient လို့ခေါါပါတယ်။ thermistors တွေဟာ၊ resistance temperature detectors တွေလောက်၊ ဈေးနှုံးအရ မများသလို၊ accuracy နဲ့ repeatability မှာလည်း၊ resistance temperature detectors တွေကို မမှီတာတွေ့ရပါတယ်။ resistance ဟာ၊ ပမာဏ ကြီးမားစွာ လိုက်ပါပြောင်းလဲတဲ့အတွက်၊ sensor နဲ့ controller တို့ကို၊ ဆက်သွယ်တဲ့ cabling အတွင်းမှာ၊ လျှော့နည်းပျောက်ဆုံးနိုင်မယ့် resistance တန်ဘိုးလည်း၊ လျှော့နည်းသွားပါတယ်။ thermistors တွေကို၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုရာမှာ၊ cable compensation နဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ resistance temperature detectors တွေလောက်၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့၊ မလိုအပ်တော့တာ တွေ့ရပါတယ်။
Thermocouples - အမျိုးအစားမတူညီတဲ့ သတ္တု (၂) မျိုးရဲ့ ထိပ် (၂) ဖက်ကို circuit တခုကဲ့သို့ ဆက်ပြီး၊ အဆက်နေရာ junction တခုကို အပူပေးကာ၊ အခြားအဆက် junction တခုကို၊ အပူ မပေးပဲထားတဲ့အခါ၊ electrical current ဟာ၊ circuit အတွင်းစီးဆင်းပါတယ်။ အပူပေးမယ့် hot junction အဆက်ကို၊ 'measuring junction' အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ အပူ မပေးပဲထားမယ့် cold junction အဆက်ကို၊ 'reference junction' အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ thermocouples တွေဟာ၊ အမျိုးအစား မတူညီတဲ့၊ dissimilar metal သတ္တု (၂) မျိုးကို ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီး၊ temperature မြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ measuring junction နဲ့ reference junction တို့အကြားမှာ potential difference ပေါါပေါက်လာပါတယ်။
Fig. Standard range of thermocouples and their range (°C)
thermocouples တွေကို၊ Type J, K, T နဲ့ အခြား Types တွေအဖြစ်တွေ့ရပြီး၊ အသုံးများတဲ့ type ကတော့ 'Type K ' ဖြစ်ပါတယ်။ Type K thermocouples တွေမှာ၊ အမျိုးအစားမတူညီတဲ့၊ dissimilar metal သတ္တု (၂) မျိုးအဖြစ်၊ 'Chrome' နဲ့ 'Alumel' သတ္တုစပ် alloy တို့ကို၊ အသုံးပြုထားပါတယ်။ chrome မှာ nickel (90 %) နဲ့ chromium (10 %) ပါဝင်ပါတယ်။ alumel မှာတော့၊ nickel (94 %), manganese (2 %) နဲ့ silicon (1 %) ပါဝင်ပါတယ်။ Type K thermocouple ကို (0° C ~ 1 260° C) temperature range အတွင်းမှာ၊ အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Sensitivity of 'Type K' thermocouple
thermocouples တွေကို၊ ပုံသဏ္ဍန်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်၊ တွေ့ရပါတယ်။ thermocouples ရဲ့ instrument case အတွင်း၊ measuring junction နဲ့ reference junction တို့ကို၊ extension tail wires တွေနဲ့ဆက်ထားပါတယ်။ extension tail wires တွေအတွက်၊ thermocouple မှာအသုံးပြုထားတဲ့ material နဲ့ အမျိုးအစားတူ၊ သတ္တု material ကို အသုံးပြုထားသလို၊ တခါတရံ copper သို့မဟုတ် copper-nickel alloy ကို၊ compensation wire အဖြစ်၊ အသုံးပြုထားပါတယ်။
thermocouples တွေကို၊ wide temperature ranges တွေအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ဈေးနှုံးအရ မကြီးသလို၊ တိုင်းတာရာမှာလည်း reasonable accurate အနေနဲ့၊ တိကျမှုရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ temperature deviation ကြောင့်၊ wire compensation ဖြစ်ပေါါနိုင်တဲ့အတွက်၊ reference junction ရဲ့ temperature ဟာ constant valve အနေနဲ့သာ၊ ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် thermocouple မှ low junction voltage အနေနဲ့ ထုတ်ပေးတဲ့ voltage ဟာ၊ ပမာဏသေးငယ်လွန်းတဲ့အတွက်၊ electrical interference သို့မဟုတ် distorting signals တို့မှပေါါပေါက်လာတဲ့ 'noise' တို့ကြောင့်၊ အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေဖို့၊ special screened cables တွေကိုသာ၊ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
control systems တွေမှာ၊ output signals အဖြစ်၊ low power analog signals တွေကိုသာ၊ အများစု သုံးစွဲခဲ့ရာမှတဆင့် 'Fieldbus®' နဲ့ 'Profibus®' တို့လို၊ digital output signals တွေ၊ ပြောင်းလဲသုံးစွဲ လာပါတယ်။ modulating signal ဖြစ်တဲ့၊ analog signals တွေကို၊ အဆက်မပြတ် continuous အသုံးပြုနိုင်သလို၊ digital signals တွေကိုလည်း၊ modulating signal အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ digital signals ဟာ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ specific voltage level (၂) ခုကြားမှ changes အပြောင်းအလဲ သို့မဟုတ် frequency အပြောင်းအလဲမှ တဆင့်၊ binary numeric values တွေကို၊ stream အနေနဲ့ အဆက်မပြတ် ထုတ်ပေးပြီး၊ modulating signal အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
Digital addressing - controller ဟာ၊ wires တွေမှတဆင့် ဆက်သွယ်ထားတဲ့၊ receivers တွေထံ information တွေကိုပေးပို့ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ထားတဲ့၊ receivers တွေထဲမှ၊ လိုအပ်တဲ့ receivers တွေ ထံသာ၊ controller မှ ရွေးချယ်ပြီး၊ ပေးပို့ခြင်းကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ receivers တိုင်းမှာ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ address တွေရှိပြီး၊ controller မှ address အရရွေးချယ်ကာ၊ digital signals တွေ၊ ပေးပို့ခြင်းကို 'digital addressing' လို့ခေါါပါတယ်။
HART® - (4 ~ 20 mA) signal နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့၊ control fied devices တွေ ရဲ့ 'Highway Addressable Remote Transducer' communications protocol ကို၊ HART® လို့ခေါါပါတယ်။ HART® protocol ဟာ၊ 1200 baud Frequency Shift Keying (FSK) system ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ FSK system ဟာ၊ 'superimpose digital information on the conventional (4 ~ 20 mA) analogue signal' ဆိုတဲ့၊ 'Bell 202 standard' ကိုအခြေခံထားပါတယ်။ HART® protocol ကို၊ intelligent field devices နဲ့ control system ကြားမှ၊ communications protocol industry standard တခုအနေနဲ့ independent organization အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့၊ 'HART® Communication Foundation' မှ၊ ရေးဆွဲပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. The Mitsubishi Chemical plant in Kashima, Japan, employed HART® communication protocol
HART® protocol လို့ခေါါတဲ့၊ communications method နည်းလမ်းကို၊ process field instruments ပစ္စည်းတွေအတော်များများမှာ၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ 4-20 mA signals ကို၊ digital communication signal အဖြစ်ပြောင်းလဲရယူပြီး၊ control system ရဲ့ လက်ရှိ 2-wire loops မှတဆင့်၊ ဆက်သွယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. HART® communication protocol
HART® ကို analog devices တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သလို၊ process မှ၊ Tag-IDs, measured values, range and span data, product information နဲ့ diagnostics အစရှိတဲ့၊ installation နဲ့ maintenance information တွေကိုလည်း၊ ရယူနိုင်ပါတယ်။ HART® protocol လို့ခေါါတဲ့၊ communications method ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ process ရဲ့ multi-drop networks တွေမှာ၊ cabling ဆက်သွယ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး၊ installation နဲ့ maintenance information တွေကိုပါ ရရှိနိုင်တဲ့အတွက်၊ process ကို management အဖြစ် စီမံခန့်ခွဲရာမှာ၊ ပိုမိုလွယ်ကူလာပါတယ်။
PROFIBUS® - open fieldbus protocol တခုဖြစ်ပြီး၊ manufacturing နဲ့ process automation applications တွေအတွက်၊ independent manufacturers ထုတ်လုပ်သူတွေ မှ၊ ရောင်းချတဲ့ communications method နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ PROFIBUS® ရဲ့ standard နဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ 'international standards EN 50170', 'EN 50254' နဲ့ 'EC 61158' တို့ကို၊ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားပါတယ်။ manufacturers ပေါင်းစုံ၊ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ process control system မှ field devices တွေ တခုနဲ့ တခုကို၊ communication အဖြစ် ဆက်သွယ်ရာမှာ၊ special interface adjustment အနေနဲ့၊ တခုနဲ့ တခုကိုက်ညီအောင်၊ ချိန်ညှိပေးဖို့ မလိုပဲ၊ PROFIBUS® ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Fig. PROFIBUS® communication protocol
PROFIBUS® communications method ဟာ digital communication method ဖြစ်ပေမယ့်၊ digitized မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ process applications တွေမှာ၊ analog signal တွေကို၊ I/O units တွေ ကတဆင့်၊ digital signal အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ၊ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ PROFIBUS® ကို၊ အဏုဇီဝဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလို၊ high-speed time critical applications တွေနဲ့၊ ရေနံဓါတုလုပ်ငန်းတွေလို complex communication applications တွေ အတွက်၊ သုံးစွဲကြပါတယ်။ functionally graduated communication protocols တွေ ဖြစ်တဲ့၊ DP နဲ့ FMS တို့နဲ့ပါ၊ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သလို၊ application အရ transmission technologies RS-485, IEC 1158-2 အရ၊ fiber optics တွေနဲ့လည်း၊ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ PROFIBUS® ဟာ၊ open fieldbus protocol ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ cell level မှ field level အထိ၊ digital programmable controllers တွေကို သုံးထားတဲ့ network system ဖြစ်သလို၊ multi-master system ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ automation, engineering နဲ့ visualization systems တွေအားလုံးကို၊ joint operation အနေနဲ့ပေါင်းစပ်ကာ၊ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
PROFIBUS® communications method တခုကို၊ sensor/ actuator level, field level နဲ့ cell level ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ sensor/ actuator level မှာ၊ sensors နဲ့ actuators တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ sensors မှ binary signals တွေနဲ့ actuator ရဲ့ binary signals တွေ ကို၊ sensor/ actuator bus မှတဆင့်ပေးပို့ပြီး၊ purely cyclically communication အနေနဲ့ data တွေကိုပေးပို့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ field level မှာ I/O units, measuring transducers, drive units, valves နဲ့ operator terminals တို့ပါဝင်ပါတယ်။ field level မှ automation systems တွေကို၊ တခုနဲ့တခု ဆက်သွယ်တဲ့အခါ၊ real-time communication system နဲ့ ဆက်သွယ်ပါတယ်။ real-time communication system မှာ data, alarms, parameters နဲ့ diagnostic data တွေပါဝင်ပြီး၊ လိုအပ်ပါက၊ purely cyclically communication အနေနဲ့ data တွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ cell level မှာတော့ PLC နဲ့ IPC လို၊ programmable controllers တွေ ပါဝင်ပြီး၊ တခုနဲ့ တခုဆက်သွယ်တဲ့အခါ၊ large data packets တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ information flow ကို၊ powerful communication functions အနေနဲ့၊ ဆက်သွယ်ပါတယ်။ smooth integration အနေနဲ့ ဆက်သွယ်တာဖြစ်သလို၊ wide communication systems အနေနဲ့ Intranet, Internet နဲ့ Ethernet တွေ ကိုပါ၊ အသုံးချတာတွေ့ရပါတယ်။
Foundation™ Fieldbus - 'all-digital, serial and two-way communications system' ဖြစ်ပါတယ်။ Local Area Network (LAN) ကို အသုံးပြုပြီး၊ factory သို့မဟုတ် plant instrumentation နဲ့ control devices တွေကို၊ ဆက်သွယ်ပါတယ်။ Fieldbus® environment ဟာ၊ ability နဲ့ status အပေါါအခြေခံပြီး၊ hierarchy အဖြစ်၊ base level group တွေကို၊ digital networks အတွင်းမှာ၊ ခွဲခြား ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ process နဲ့ manufacturing automation applications တွေမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့၊ built-in capability devices တွေ တခုနဲ့တခုကို၊ network သုံးပြီး၊ ဆက်သွယ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Foundation™ Fieldbus ဟာ၊ HART® နဲ့ PROFIBUS® တို့လို၊ အဖွဲ့အစည်းတခုမှ၊ standard အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတဲ့၊ communications protocol နည်းလမ်းမဟုတ်ပဲ၊ manufacturers တွေမှ၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ products တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ Foundation™ Fieldbus communication systems တွေကို၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ product makers အရည်အတွက်၊ (၁၀၀) ကျော်လောက် ရှိပါတယ်။
Reference and image credit to : Steam Engineering Tutorials, http://www.imexbb.com/, http://www.hartcomm.org/, http://www.imexbb.com/,
Posted by ဒူဒူကြီး at 03:51